बजारको हल्ला जस्तो सजिलो छैन क्यानडा : विजय हमाल – Nepal Parikrama
लामो समयदेखि नेपालबाट क्यानडामा बसाईसराई गरेर जान चाहनेहरुलाई परार्मश तथा प्रोसेसिङ काम गर्दै आउनुभएको छ वल्र्ड रिच इमिग्रेसन एण्ड एजुकेशन फाउण्डेशन प्रालीका प्रबन्ध निर्देशक विजय हमालले । ग्रामिण विकास र समाजसास्त्र विषयमा स्नात्तकोत्तर गर्नुभएका हमालले क्यानडा जान चाहनेहरुको लागि परार्मश दिने कामलाई नै आफ्नो पेशा बनाएर यही क्षेत्रमा आफूलाई स्थापित समेत गरीभइसकेको छ । हमालको जिवनीसँग सम्बन्धित केही कुरा र नेपालबाट क्यानडामा जान चाहनेहरुका लागि अहिले अवसर कस्तो भन्ने पेरिफेरिमा रहेर नेपाल परिक्रमाका सम्पादक पुण्पप्रसाद धमलालाले उहासँग गरेको कुराकानीको अंश ।
– दिनचर्या कसरी चलिरहेको छ ?
१० बजेबाट लगभग ५ बजेसम्म कार्यालयमा नै व्यस्त भइन्छ । जे होस राम्रो प्रगतिको आभाष गर्न नसकेपनि बाँच्न गाह्रो भएको छैन ।
– तपाईको शिक्षा र आबद्धता ?
ग्रामिण विकास र समाजशास्त्र बिषयमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट एमएसम्मको अध्ययन पूरा गरेको छु । सन् २००४ देखि वल्र्ड रिच इमिग्रेसन एण्ड एजुकेशन फाउण्डेशन प्रालीको प्रबन्ध निर्देशकको रुपमा कार्यरत छु । अहिलेसम्म ६ हजार भन्दा बढीलाई परामर्श दिएकोमा ३ सय बढी आब्रवासनका लागि सफल भएका छन् । हाम्रोबाट भिषा अप्लाई गर्नेहरुमा ९० प्रतिशतले सफलता हात पारेका छन् । क
– यो पेशा तर्फ कसरी आकर्षित हुनुभयो ?
साथी संगतबाट काम सिक्ने क्रममा कन्सल्टेन्सी सम्बन्धि लत बस्यो । झण्डै ४ बर्ष अरुको कन्सलटेन्सीमा परामर्शदातको रुपमा काम गरियो । पछि शैक्षिक परामर्श दिनेक्रममा भेट भएका व्यक्तिहरुको सहयोग र सल्लाहमा सन् २००४ बाट सुरु गरेको इमिग्रेसन एण्ड एजुकेशन फाउण्डेशनलाई अहिलेसम्म निरन्तरता दिन सफल भएको छु । मलाई यो पेशा तर्फ लामो समयसम्म आबद्ध भइरहन आमाबुबा र जीवन संगिनी रुची हमाल(महर्जन)को प्रेरणा मुख्य छ ।
– व्यवसायमा अवसर बढी आउँछन कि चूनौती ?
यो व्यवसाय नेपालको नीति नियम भन्दा बढी क्यानडाको नीति नियममा निर्भर हुन्छ । फितलो नियम हुँदा काम गर्न सजिलो हुन्छ, सफलता पनि त्यसै अनुसार हात पर्छ । कहिलेकाँही क्यानडामा नीति, नियममा कडाइ भइदिन्छ, त्यो समय काम गर्न सहज हुन्न । अहिले पनि बजारमा चलेको हल्ला जस्तो क्यानडा पढाउन,जान सहज छैन ।
– तपाईको जीवनको अविष्मरणीय क्षण
कक्षा ५ देखि नै एउटा प्रहरी अधिकृत बन्ने अठोस लिएर अघि बढेको थिए । तर प्रहरी निरीक्षक बन्ने पहिलो तथा अन्तिम प्रयासमा असफल हुँदाको त्यो क्षण अहिलेसम्म भुल्न सक्दिन । यो असफलता नै मेरो जीवनको टनिङ पोइन्ट बन्यो । अनि बिचमा माईलो दाजु गुमाउँदा जीवनमा दोश्रो झड्का लाग्यो ।
–प्रेम जीवन कस्तो रह्यो ?
कक्षा १२ सम्म बढ्दा प्रेममा खासै फसिएन, प्रहरी निरीक्षक बन्ने अठोटको पछि लागियो । लक्ष्य पुरा नभएपछिको बिचलनबाट सुरु भएको प्रेम अहिले बिबाहमा परिणत भएको छ । साथमा २ छोरा समेत छन् ।
– पारिवारिक अवस्था र बाल्यकाल कसरी वित्यो ?
परिवार सम्पन्न भएको कारण कुनै समस्या भएन । शिक्षित बन्नुपर्छ भन्ने प्रेरणा सधै मिलि नै रह्यो । साथमा आर्थिक सहयोग पनि सधै कायम रह्यो । बाल्यकाल अभावमा भन्दा बढी रमाइलोमा बित्यो ।
– लामो समयदेखि परार्मश दिने पेशा गर्दै हुनुहुन्छ, क्यानडामा नेपालीको लागि अवसर र मान्छेमा यसप्रतिको बुझाई कस्तो पाउनुभएको छ ।
राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो, अहिले बजारमा धरै किसिमका हल्ला चलिरहेका छन् । अझ सामाजिक सञ्चालहमा क्यानडा यो अफर र त्यो अफर भनेर गलत प्रचार भइरहेको समेत मैले देखेको छु । वास्तमा कुरा के छ भने कुनै पनि विकसित देशले अरु देशबाट आफूलाई फाइदा नहुने र हानी पुग्ने खालको मान्छे आओस् भन्ने चाहन्न । त्यसैले क्यानडाले पनि सकेसम्म राम्रो र योग्य व्यक्तिलाई मात्र आफ्नो देशमा अनुमति दिन्छ । जो कोही व्यक्ति सजिलै क्यानडा जान्न सक्दैनन् । कतिपय अवस्थामा अहिले चोरीको बाटोबाट पनि क्यानडा छिर्ने प्रयत्न भएको देखिन्छ, यो आफैमा सरासर गलत र आफ्नै भलो नहुने काम हो । कतिपयले दलालको कुरा पत्याएर चोरीको बाटोबाट क्यानडा छिर्न खोज्दा उनीहरुको धरै पैसा समेत नोक्सान हुने गरेको छ । क्यानडा त्यस्ता व्यक्तिका लागि अवसर हो जोसँग राम्रो पढाईका साथसाथै हातमा स्किल पनि छ ।
– कस्ता व्यक्तिहरु क्यानडामा बसाईसराई गरेर जान सक्छन् ?
मैले अघि पनि भनिसके जोसँगको राम्रो उच्च तहको शिक्षा र काम गर्ने क्षमता छ । उनीहरुलाई क्यानडाले बढि अवसर प्रदान गर्दै आएको छ । जस्तो कि इन्जिनियर, डाक्टर र अन्य विभिन्न विषयमा राम्रो नतिजा ल्याएर स्नातकोत्तर गरेर पीएचडी गरेका व्यक्तिहरुलाई क्यानडाले आफ्नो देशमा बसाईसराई अनुमति दिदै आएको छ ।
– भनेपछि बजारमा क्यानडाको विषयमा प्रचार गरिने सबै कुरा सही होइनन् ?
पक्कैपनि ति सबै हल्लाहरु सही होइनन् । क्यानडाको बारेमा परार्मश दिने र प्रोसेसमा सघाउने आधिकारिक सस्थाहररु थोरै मात्र छन् । कतिपय दललाहरुले पैसा कमाउन गलत मनासाय राखेर पनि युवाहरु ठग्ने गरेका छन् । बजारमा क्यानडा इमिग्रेसन र अध्ययन विषयमा आउने कतिपय कुराहरु भ्रम मात्र हुन् ।
–अन्तमा के भन्न चाहनुहुन्छ ?
विदेश जानु, त्यसमा पनि क्यानडा बजार हल्ला जस्तो सजिलो छैन । यसर्थ राम्रो कन्सलटेन्सी तथा कन्सल्टेनट मार्फत परामर्श लिएर अघि बढाउनुहोला भन्न चाहन्छु । आप्रवासन सम्बन्धी परामर्श दिनेहरुले पनि लाभका लागि अरुलाई दुःख दिने काम गर्नुहुन्न । असल काम गरौ । यो व्यवसायमा लागेका साथिहरुलाई पनि कम लाभ अधिक सेवा गरेर पेशागत मर्यादा कायम राखौ भन्न चाहन्छु ।
Published On: ६ श्रावण २०७३, बिहीबार १२:४६